Yocingo ihlaziywa kwakhona kwaye kule meko yinguqulelo 3.5.3 | Ndisuka mac
Besibaluleke kakhulu kwiveki ephelileyo ngokweenguqulelo ezintsha zeTelegram kwaye sifumene ezininzi zilandelelana. Inguqulelo yangaphambili ithembise ukusetyenziswa kwe-Force Touch ukwenza eminye imisebenzi, phakathi kwayo esigqamisa kuyo: phendula, hlela okanye uthumele imiyalezo kwangoko kwi-Mac yethu kodwa akukho nanye esebenzayo, kwanaleyo ibisebenza "ukuhlela" ngoku akusabonakali kusebenza kule nguqulo yamva nje.
Yinto engaqhelekanga kuba iTelegram ayihlali isilela kule ngqondo kwaye xa bongeza into bayenza kakuhle, kodwa kuya kufuneka silinde ukubona ukuba bayayisombulula na ingxaki kwinguqulelo entsha, kuba kule 3.5.3 iinketho nge Ukunyanzelwa kokuchukumisa akusebenzi nokuba kungaphantsi kwi-Mac yam, kodwa ke, kolu hlaziyo izinto ezintsha ezimbalwa zongezwa kwimenyu ekwabelaneni ngeencamathiselo kwimiyalezo.
Njengoko sinokufunda kakuhle kwinkcazo yezinto ezintsha ezenziweyo, ziyongezwa imenyu entsha eqhotyoshelweyo (jonga iifayile zaluphi na uhlobo ngaphambi kokuhambisa) kunye nemenyu entsha yokwabelana esivumela ukuba songeze izimvo.
Ziindaba ezimbini ezibalulekileyo kodwa ngokwenene ngesibathanda ukuba basombulule iibhugi xa besebenzisa i-Force Touch kwiiMacs, kuba yinto enomdla kwizicelo kunye nabaphuhlisi kubonakala ngathi bayakulibala ukuphumeza kuzo. Ndiyathemba ukuba baya kuwusombulula lo mbandela kungekudala kwaye siyokonwabela iMacBook. Ngaphandle kwayo yonke into, iTelegram iyaqhubeka nokuba sesona sicelo sisebenzisa imiyalezo kwiiMacs, kodwa njengoko sisoloko sisitsho, wonke umntu ukhululekile ukusebenzisa usetyenziso aluthanda kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » I-Telegraph ihlaziywa kwakhona kwaye kule meko ichukumisa uguqulelo 3.5.3
Sivavanye i-QacQoc GN22B hub ngesixhobo se-USB C